Imba | MyCoolClass Co-inoshanda
MyCoolClass ndeyen mushandirapamwe wevadzidzisi vepasirese neayo epamhepo yekudzidzisa online. We batanidza vadzidzisi vakanakisa vanobva kutenderera pasirese nevadzidzi vane shungu munzvimbo inonakidza, yakavhurika uye ine tsika dzakasiyana. Chii chimwe, we kupa vadzidzisi mukana we vane yavo nzvimbo yebasa.
Sevashandi-mushandirapamwe, isu tinoteera misimboti minomwe yakatarwa neInternational Cooperative Alliance. Tiri yakanyoreswa muUnited Kingdom sesosaiti uye nhengo dzeMakambani UK.
JOINA I # TEACHERREVOLT TODAY
Ndiwe mukuru. Iwe wakasununguka kugadzira zvako wega zvidzidzo nenzira yako wega. Iwe unodzora rako rekubhuka uye purogiramu uye iwe unoseta yako wega mitengo.
Zviri nyore kubata vadzidzi papuratifomu yedu yekudzidzisa.
Kugovana Screen, faira manejimendi, chena kushandisa, uye kurongeka kwezvinhu zviri nyore uye zvine mutsindo. Iyo chikuva inowanikwa mumitauro gumi izvozvi uye mimwe iri munzira!
Mubairo uri nani, mabhenefiti ari nani uye pachena pachena.
Vadzidzisi vanobhadhara 19% yemari dzavanowana pamwedzi mumubatanidzwa. Izvi zvinovhara mashandiro ekushandisa uye mupiro muhomwe muhomwe kutibatsira kuti tikure. Chikamu che19% chinoendawo munguva yako yekubhadhara! Isu hatina vagovani vanotora akacheka. Senhengo, iwe muridzi wekambani futi, uye tanga kutaura kwako mune zvinoitika kune chero purofiti.
Vadzidzisi vanounganidza mazuva manomwe pagore emubhadharo wekurwara kana wega zororo zvinoenderana nemupiro wavo uye pakati nepakati muhoro wezuva. Tinoda kuti vadzidzisi vazvichengete pavanorwara kana kutora zororo vasina kurasikirwa nemari. Iwe unogona chete kutora izvo iwe zvawakaisa mukati.
Hapana zvirango kana muripo wekukanzura kana uchirwara kana uine emergency.
Zvakaipa zvinoitika. Kana iwe uine mhuri yechimbichimbi kana uchida kutora mazuva mashoma kubva, ingo kanzura makirasi ako uye rega timu yekutsigira izive.
Chero nguva, chero nzvimbo, chero kupi
Yedu chikuva inoshanda chero kwauri uye chero nzira kwaunotora iwe. Zvese zvaunoda ndeye internet kubatana. Yedu chikuva inoshandawo kuChina pasina zvinorambidzwa.
Iwe unobatsira kuita sarudzo dzakakosha.
Wese mudzidzisi achave nekwaniso kune nhengo-chete webhusaiti yakatsaurirwa kune co-op, neruzivo rwemari, mitemo nemirau, ruzivo rwesarudzo, sarudzo, nezvimwe. Chero nhengo inogona kumhanyirawo Bhodhi revatungamiriri.
Gadzira uye ubatsirane
Kutanga kana kujoina Chikwata Chekusika uye gadzira makosi nevamwe vadzidzisi. Tumira makosi ako kuti atenderwe neCurriculum Board uyezve yedu Dhizaini Dhizaini ichaunza yako kosi kuhupenyu! Iwe nechikwata chako muchawana mvumo kana kosi yenyu yatengeswa!
Batsira avo vanoida zvakanyanya
MyCoolClass inoronga kuvhura chirongwa chekupa mahara kudzidzisa kuvana vanotambura mune zvehupfumi nekugadzira isingabatsiri mari.
Zvichienderana uye vakarongeka mubhadharo
MyCoolClass ine dzakasiyana siyana nzira dzekubhadhara kuti uve nechokwadi chekuti iwe unobhadharwa zvakakwana sezvinobvira.
Vadzidzisi vese vanogamuchirwa.
Kana iwe uchikwanisa kudzidzisa zvidzidzo zvaunopa, unogamuchirwa. Isu hatinei nekuti ndiwe ani, kwaunobva, kwaunogara, kana mutauro waunotaura. Kusarura hakuna kutonhorera uye hakuna nzvimbo mune dzidzo.
Kana iwe uchida izvo zvatiri kuita uye uchida kuratidza rutsigiro sezvatinokura,
zvipo zvako zvinoongwa.
Batsira kuburikidza neGoFundMe
Batsira kuburikidza nePayPal
Mudzidzisi-Muridzi wePuratifomu Co-Op
Ehe, ndizvozvo !!! Vese vadzidzisi vanova muridzi wemubatanidzwa uye vane danda mukambani. Sekubatana, hapana "Big Boss" kana varimi vanoita sarudzo dzese. Nhengo yega yega ine chikamu mukambani uye vhoti yakaenzana.
Kubatana Pakati Pebatanidzwa
Kubatanidzwa mune zvehupfumi
Yakabhadharwa Yemunhu Zororo
Kudzidziswa & Dzidzo
Kwete Draconian Maitiro
Nyorera kuve Mudzidzisi
© 2021 MyCoolClass Co-operative Limited | Kodzero dzose dzakachengetedzwa.
Kunyoreswa muUnited Kingdom sesangano rakanyoreswa pasi peCo-operative uye Nharaunda Inobatsira Masangano Act 2014. Reg No. 4790
XIsu tinoshandisa makuki pane yedu webhusaiti kukupa iwe chakanyanya kukosha chiitiko nekurangarira zvaunofarira uye kudzokorora kushanya. Nekudzvanya "Gamuchira Zvese", unobvumidza kushandiswa kweZVESE makuki. Read MoreCookie settings Gamuchira Zvese
Isu tinoshandisa makuki nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka senge;
kushandisa zvakakosha zvikamu zveMyCoolClass mawebhusaiti,
kusimudzira ruzivo rwako nekushandisa MyCoolClass,
kuti unzwisise zvirinani mashandisiro anoita vanhu Webhusaiti. Izvi zvinogona zvakare kusanganisira makuki kubva kune echitatu mapato enhau mawebhusaiti.
Unogona kushandura marongero ako ekuki chero nguva nekutevera mirairo pazasi pepeji muchikamu che "Manage your cookies".
Isu tinoshandisa makuki uye humwe hutekinoroji hwekutevera nekuda kwezvinangwa zvinotevera:
Kuongorora kuti vashanyi sei, iwe webhusaiti yedu
Kuongorora kufarirwa kwemakirasi uye makosi
Kutibatsira kuti tiite zvinoshanda uye zvemukati zvinowedzera kune webhusaiti yedu
Kugadzirisa zvaunofarira zvekuki
Unogona kushandisa zvido zvako zvecookie pawebsite yeMyCoolClass, uye iwe ungangodawo kudzora makuki kuburikidza newebhu webhu marongero ako. Mazhinji mabhurawuza ewebhu anotendera kumwe kudzora kwemazhinji makuki Kuti uwane zvimwe nezve makuki, kusanganisira maitiro ekuona kuti makuki akaiswa sei, shanya www.aboutcookies.org kana www.allaboutcookies.org
Tsvaga maitiro ekugadzirisa makuki pane akakurumbira mabhurawuza:
Kuti uwane ruzivo rwakanangana nemamwe mabhurawuza, shanyira webhusaiti yekuvandudza webhusaiti.
Kuti usarudze kuteverwa neGoogle Analytics pane mamwe mawebhusaiti, shanya http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Makuki anodikanwa akakosha zvakanyanya kuti webhusaiti iite nemazvo. Aya makuki anovimbisa ekutanga mashandiro uye ekuchengetedza maficha ewebhusaiti, asingazivikanwe.
_wpfuuid 11 makore Iyi cookie inoshandiswa neWPForms WordPress plugin. Iyo cookie inoshandiswa kubvumidza iyo yakabhadharwa vhezheni ye plugin yekubatanidza zvinyorwa nemushandisi mumwe chete uye inoshandiswa kune zvimwe zvinowedzerwa maficha senge Fomu Abandonment addon.
yakatarisa_cookie_policy 1 gore Iyo cookie yakagadzwa neGDPR Cookie Chibvumirano plugin yekuchengetedza kuti kana mushandisi abvumidza kushandiswa kwemakuki. Izvo hazvichengetedze chero epamoyo data.
Kushambadzira makuki anoshandiswa kupa vashanyi vane akakodzera kushambadzira uye kushambadzira mishandirapamwe. Aya makuki anoteedzera vashanyi pane mamwe mawebhusaiti uye anotora ruzivo kuti ape akajairwa kushambadza.
_fbp 3 mwedzi Iyi cookie yakaiswa neFacebook kuratidza kushambadza kana paFacebook kana padhijitari inofambiswa neiyo Facebook kushambadzira, mushure mekushanyira webhusaiti.
fr 3 mwedzi Facebook inoisa iyi cookie kuratidza kushambadza kwakakodzera kune vashandisi nekutevera maitiro evashandisi pawebhu, pane saiti ine Facebook pixel kana Facebook social plugin.
HERE 1 gore 24 mazuva Google DoubleClick IDE makuki anoshandiswa kuchengeta ruzivo rwekuti mushandisi anoshandisa sei webhusaiti kuti avaratidze nematanho akakodzera uye zvinoenderana neprofile yemushandisi.
test_cookie 15 kwemaminitsi Iyo test_cookie yakaiswa ne doubleclick.net uye inoshandiswa kuona kana mushandisi webhusaiti inotsigira makuki.
Mushanyi_INFO1_LIVE 5 mwedzi 27 mazuva Kuki yakagadzwa neYouTube kuyera bandwidth inotarisa kuti mushandisi anowana nyowani kana yekare mutambi interface.
YSC chiitiko YSC kuki yakagadzwa neYouTube uye inoshandiswa kuteedzera maonero emavhidhiyo akadzika mumapeji eYouTube.
yt-kure-kwakabatana-zvishandiso haana Aya makuki akaiswa kuburikidza neakaiswa mukati youtube-mavhidhiyo.
yt-kure-mudziyo-id haana Aya makuki akaiswa kuburikidza neakaiswa mukati youtube-mavhidhiyo.
Analytical cookies anoshandiswa kunzwisisa kuti vashanyi vanobatana sei newebsite. Aya makuki anobatsira kupa ruzivo pane metric nhamba yevaenzi, bounce rate, traffic sosi, nezvimwe.
_ga 2 makore Iyo _ga cookie, yakaiswa neGoogle Analytics, inoverenga mushanyi, chikamu uye mushandirapamwe data uye zvakare inoteedzera mashandisiro esiti saiti yeiyo saiti analytics mushumo. Iyo cookie inochengetera ruzivo zvisingazivikanwe uye inopa nhamba yakasarudzika inogadzirwa kuti ione vashanyi vakasarudzika.
_ga_QB4KJ2NX1F 2 makore Iyi cookie yakaiswa neGoogle Analytics.
KUTENDA Makore gumi nematanhatu 16 mwedzi 3 mazuva 26 maawa Aya makuki akaiswa kuburikidza neakaiswa mukati youtube-mavhidhiyo. Ivo vanonyoresa isingazivikanwe nhamba yehuwandu pane semuenzaniso kangani vhidhiyo inoratidzwa uye ndeapi maseturu anoshandiswa pakutamba Hapana dhata data inounganidzwa kunze kwekunge iwe uchipinda muakaunti yako yegoogle, pakadaro sarudzo dzako dzakabatana neakaundi yako, semuenzaniso kana iwe ukabaya "se" pavhidhiyo.
Sevha & Bvuma